KMF/Cnoe: “Habadoana ny vato maty…” | NewsMada
KMF/Cnoe: “Habadoana ny vato maty…”
“Ny mety ho dikan’ny vato maty: tsy mahalala ny tokony hataony ny mpifidy. Manaporofo ny mety ho habadoan’ny olona izany. Tsy fantatry ny mpifidy ny tokony hataony, matoa nataony maty ny vatony. Raha nataony vato fotsy avokoa indray aza izany, hafa ny dikany.”
Io ny fanehoan-kevitry ny filoha nasionalin’ny KMF/Cnoe, Andriamalazaray Andoniaina, momba ny fahamarona’ny vato maty sy ny vato fotsy, nahatratra 7,32%, tamin’ny voka-pifidianana vonjimaika navoakan’ny Ceni. Tena mariky ny habadoana, ohatra, ny fisian’ny mpifidy nanao sonia tany ambadiky ny biletà tokana, izay nasian’ny mpikamban’ny birao fandatsaham-bato roa sonia.
Amin’ny ankapobeny, ny tena dikan’ny vato fotsy: na ny rafitra sy ny fomba fanatanterahana ny zotram-pifidianana no tsy tiany, na ireo kandidà no tsy misy tiany na iray aza. Tsy voatery hoe ny Ceni izay rafitra amin’ny fanatanterahana fifidianana izay, fa mety ny lalàna, na zavatra hafa… Izay no dikan’ny vato fotsiny, raha atao hoe nahomby ny fanabeazana ara-pifidianana natao.
Mila tohizana ny fanabeazana ara-pifidianana
“Tsy misy afa-tsy ny fanabeazana ara-pifidianana ny olom-pirenena no hamafisina hisorohana izany amin’ny fifidianana manaraka “, hoy izy. Tsy ny KMF/Cnoe na ny firaisamonina sivily ihany no manao izany, fa ny antoko politika indrindra. Tsy afa-miala koa ny fitondrana. Raha ny tena izy, adidin’ny fitondrana ny manao fanabeazana. Na amin’ny fifidianana io, na ho an’ny maha olom-pirenena.
Tohizana amin’izany ny fanazavana lalàna, fa tena mila hazavaina amin’ny olom-pirenena ny fomba fifidianana ary mila ventesina amin’ny haino aman-jery. Nefa olana koa, tsy miraika na tsy miraharaha ny olona. Rehefa antomotra na tonga ny fotoana, vao mikoropaka avokoa ny ankamaroany.
Efa hatramin’ny 15 oktobra no nitenenana ny hoe araho maso ny karatra maha mpifidy ary alaivo, fa tsy taitra ny olona: andron’ny fifidianana vao tonga sy mikoropaka. Milaza ny sasany fa miasa ka tsy afaka. Nefa mivoha andro tsy fiasana, asabotsy sy alahady, ny biraom-pokontany.
“Tsotra be ny manilika andraikitra any amin’ny mikarakara fifidianana fa tokony ho tonga saina voalohany isika karakaraina: inona no nataontsika?”, hoy ihany izy.